ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်သည့် မင်းမဲ့ စရိုက်များ၊ အုပ်စုဖွဲ့ အနိုင်ကျင့်သည့် ဒီမိုကရေစီ အနိုင်ကျင့် မှုများ၊ ဒီမိုကရေစီ အလွဲသုံး မှုများကို လျစ်လျူရှုလျှင် တိုင်းပြည် နစ်နာမည် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်သည့် မင်းမဲ့ စရိုက်များ၊ အုပ်စုဖွဲ့ အနိုင်ကျင့်သည့် ဒီမိုကရေစီ အနိုင်ကျင့် မှုများ၊ ဒီမိုကရေစီ အလွဲသုံး မှုများကို လျစ်လျူရှုလျှင် တိုင်းပြည် နစ်နာမည်
ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ”ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်သည့် မင်းမဲ့ စရိုက်များ၊ အုပ်စု ဖွဲ့ အနိုင်ကျင့်သည့် ဒီမိုကရေစီ အနိုင်ကျင့် မှုများ၊ ဒီမိုကရေစီ အလွဲသုံးမှု များကို လျစ်လျူရှုလျှင် တိုင်းပြည် နစ်နာ မည် ဖြစ်ကြောင်း” ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းက ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဒလမြို့နယ် သီရိဇေယျ အနော်ရထာ ခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် မြို့မိမြို့ဖ များနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူ များ အား တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနားတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ထွန်းအောင်နှင့် ဒေါက်တာ ဖေသက်ခင်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေ၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်သိမ်း၊ ဒုတိယ ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်တင်ဝင်းနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ၊ နိုင်ငံ ရေး ပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရပ်မိ ရပ်ဖများနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ရှေးဦးစွာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းက ဒလမြို့သို့ လာရောက် ရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပဏာမ ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ဒလမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးထွန်းထွန်းဝင်းက မြို့နယ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို တင်ပြသည်။
ယင်းနောက် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များနှင့် မြို့မိမြို့ဖ များက မြို့နယ်၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ ရရှိရေးများ အပါအဝင် မြို့နယ်၏ လိုအပ်ချက် များနှင့် ပတ်သက်၍ ကဏ္ဍအလိုက် တင်ပြကြသည်။
တင်ပြချက် များ အပေါ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယ ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း ဖြည့် ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ယင်းနောက် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် မြို့နယ်၏ တင်ပြချက် များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ ပိုမို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် လိုအပ်ချက်များ ရှိသေး၍ နိုင်ငံတော်၏ ဘတ်ဂျက် ဘဏ္ဍာငွေ များကို တိုးမြှင့် ပေးခဲ့ကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေနှင့် သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ ရရှိရေး အတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရနှင့် နယ်စပ် ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်မှု ဝန်ကြီး ဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ အလျင်အမြန် ဆောင်ရွက် သွားရန် လိုအပ် ကြကြောင်း၊ မိမိတို့ အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်း ကို လွှတ်တော် အတွင်း သာမက လွှတ်တော်ပြင်ပ ပြည်သူများ ထံ၌လည်း ထိထိ ရောက်ရောက် ကျင့်သုံးနိုင်ရန် အချိန်ယူ၍ ကွင်းဆင်း ဆောင် ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်မှုမှာ အကျိုး ရှိသည်ကိုလည်း မျက်ဝါး ထင်ထင် မြင်ခဲ့ရကြောင်း၊ လွှတ်တော် အတွင်း မကြား ရသေးသည့် အသံများကို ကြားရကြောင်း၊ မြို့နယ်နှင့် ဒေသခံ ပြည်သူများ အတွက် အကျိုး ရှိပါလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ စနစ်နှင့် ဈေးကွက် စီးပွားရေး စနစ်ကို ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးနိုင်ရန် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြည်သူတို့က ၉၂ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ပြဋ္ဌာန်း ပေးခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ ပြဋ္ဌာန်းမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ စနစ်နှင့် ဈေးကွက် စီးပွားရေး စနစ်ကို ကျင့်သုံး နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အလားတူ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်တွင် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ နိုင်ခဲ့၍ လွှတ်တော်များပေါ် ပေါက် လာခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းလွှတ်တော် များကပင် အစိုးရကို ရွေးချယ် ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းအစိုးရက ပြည်သူ့ ဆန္ဒ၊ ပြည်သူ့ သဘောထား အပေါ် မူတည်၍ ပြည်သူ့ အစိုးရ အနေဖြင့် အုပ်ချုပ်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ပြည်သူ့ဆန္ဒ၊ ပြည်သူ့ သဘောထား လိုအပ် ချက်များကို လွှတ်တော်မှ တစ်ဆင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက မေးခွန်း များ မေးမြန်းကြကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး များကလည်း ပြန် လည် ဖြေကြားရကြောင်း၊ ထိုသို့ မေးမြန်း ဖြေကြားရာတွင် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက တစ်ဆင့်သာ မေးမြန်း ဖြေကြားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မေးခွန်းများ မေးမြန်း ဖြေကြားမှု များသည်လည်း အစိုးရ၏ အာမခံချက် ကတိများနှင့် တာဝန်ခံ ချက်များ ဖြစ်သွားကြောင်း၊ အစိုးရက ဖြေ ရှင်း ပေးရပါမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ အာမခံချက် များနှင့် ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက် များကို အကောင်အထည် ဖော်ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အကောင် အထည် မဖော်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ မေးခွန်းများ၏ အာနိသင်မှာ လွှတ်တော် အပေါ် အာမခံချက် များနှင့် ကတိများပင် ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ မူဝါဒ များကို လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော ရန် လိုအပ်လျှင် ဥပဒေ တစ်ရပ် ဖြစ်သွား ကြောင်း၊ ယနေ့ ကာလသည် ”လူနှင့် အုပ်ချုပ်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ မူဖြင့် အုပ်ချုပ် နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း” အဆိုပါ မူများကို လွှတ်တော်က ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ် ကြောင်း၊ ဥပဒေ ကြမ်းများကို လွှတ်တော် နှစ်ခုက သဘောတူလျှင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ဥပဒေအဖြစ် အတည်ပြု ပေးရကြောင်း၊ သမ္မတက ၁၅ ရက် အတွင်း အတည်ပြု ပေးရကြောင်း၊ မှတ်ချက်နှင့် ပြန်ပို့လျှင် လွှတ်တော်က ပြန်လည် ဆွေးနွေးပြီး မူလအတိုင်း အတည် ပြုပါက လက်မှတ် မထိုးလျှင် ၁၅ ရက် အတွင်း အတည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လွှတ်တော်က တင်သွင်းသည့် ဥပဒေကြမ်းသည် ပြည်သူက ရွေးချယ်ထားသည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များ သာမက ကော်မတီများ၊ ပညာရှင် များကပါ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်၍ ပြည်သူက ပြဋ္ဌာန်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြဋ္ဌာန်းပြီးလျှင် အားလုံးက လိုက်နာရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ အနေဖြင့် မူဝါဒ ချမှတ်ရာတွင် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုး စီးပွားကို ဖြစ်စေနိုင်မည့် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နိုင်မည့် ဥပဒေ ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လူတစ်ဦး၊ အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် လွှတ်တော်ကို ကာကွယ်သည့် ဥပဒေမျိုး မဖြစ်စေရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒီမိုကရေစီစနစ် သည် အကောင်းဆုံး စနစ်အဖြစ် ယူဆ နေကြောင်း၊ တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး (Rule of Law) ဖြစ်ရန်လည်း လိုအပ် ကြောင်း၊ သို့သော် ဥပဒေနှင့် မညီညွတ် သည့် မင်းမဲ့စရိုက်များ၊ အုပ်စုဖွဲ့ အနိုင်ကျင့်သည့် ဒီမိုကရေစီ အနိုင်ကျင့်မှုများ၊ ဒီမိုကရေစီ အလွဲသုံးမှု များကို လျစ်လျူ ရှုလျှင် တိုင်းပြည် နစ်နာမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်ကြောင်း ပြန်စေမည့် အဖြစ်မျိုးသို့ ဖိတ်ခေါ် မိစေမည့် အဖြစ်မျိုး မလုပ်ကြရန် လိုကြောင်း၊ စနစ် တစ်ခုမှ စနစ်တစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲရာတွင် ခက်ခဲမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မည်သို့ပင် ဖြစ် စေ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဈေးကွက် စီးပွားရေး စနစ်ကို မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင် သွားကြ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လွှတ်တော် တစ်ခုတည်း ဆောင်ရွက် ၍မရကြောင်း၊ ပြည်သူပါဝင်မှ အောင်မြင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တရား ဥပဒေ စိုးမိုး မှု ရှိမှဖြစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိပါက လက်ရှိ တည်ငြိမ်အေး ချမ်းမှု ပျက်ပြား သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိဒေသ၊ မိမိနိုင်ငံ တိုးတက် ချင်လျှင် တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ် ကြောင်း၊ ဖြစ်ချင်သည်များကို အကောင် အထည်ဖော်ရာတွင် အားလုံး ပါဝင်မှ ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲ အပြီးတွင် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌသည် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် လာကြသူများအား ရင်းရင်း နှီးနှီး နှုတ်ဆက်သည်။
This entry was posted on March 18, 2013, in ဆောင်းပါး, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← Samsung မိုဘိုင်းဖုန်း၏ လျှို့ ဝှက် ကုဒ်နံပါတ်များ
လက်ပန်းတောင်းသံဃာဖြိုခွဲမှုကိစ္စ မီးလောင်ဗုံး သုံးတယ်လို့ ” THE NEW YORK TIMES ” သတင်းစာကထုတ်ဖေါ်ပြီ →